धूलो–धूवाँबाट जोगिने उत्तम उपाय के हुनसक्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः फाल्गुन २६, २०७३ - साप्ताहिक
धूलो–धूवाँबाट जोगिने उत्तम उपाय के हुनसक्छ ?
सबैभन्दा राम्रो उपाय त घरबाट ननिस्कनु नै हो, तर जसको घर बाटो छेउमा छ र बाहिर निस्कनै पर्छ भने मास्क लगाउनु राम्रो ।
माक्स लगाउने, चश्माले आँखा ढाक्ने, ठूलो रुमालले टाउको बेर्ने ।
एनी कुँवर, अभिनेत्री/नृत्य प्रशिक्षक
कि काठमाडौं छाडेर जाउँm, नभए सबै मिलेर सम्बन्धित निकायलाई मेल, एसएमएस तथा सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्रेसर दिनुपर्‍यो । मास्कको भेराइटी खोजेर बस्नु भएन ।
नेताहरूलाई सर्वसाधारण झैं पसिना चुहाउँदै हिँडाउने, उनीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आउ–जाउ गर्न साइकल चढाउने, धूवाँ–धूलो मानाका माना चाख्न लगाउने, अनि ‘युरेका’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाउने । जबसम्म माथिकाहरूले गाडीको झण्डाले पन्छाएको धूवाँ–धूलो देख्दैनन्, तबसम्म आम जनताले त्यस्तै कपडाको टुक्रा मुखमा बाँधेर हिँड्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन ।
योगेश्वर अमात्य, गायक
जहाँ–जहाँ अत्याधिक धूलो उड्छ, भएभरका मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालय त्यही सडकको छेउमा खुला ठाउँमा राखेर काम गर्न लगाई बिहान ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म उठ्नै नदिने । उहाँहरूलाई डालोका डालो धूलो नख्वाएसम्म काठमाडौं बन्दैन ।
यमन श्रेष्ठ, अभिनेता
व्यवस्थित सहरीकरण तथा फोहोरजन्य पदार्थहरूको वैज्ञानिक सन्तुलन नै काठमाडौंको धूलो–धूवाँबाट जोगिने प्रभावकारी उपाय हो । ग्लोबल वार्मिङ न्यूनीकरणका लागि पुराना सवारी साधनको चाप घटाइ आधुनिक सवारी साधनको बिस्तार, सडकहरूको प्रक्रियाबद्ध विकास तथा पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा हुनुपर्छ।
ठूलाबडाहरू चढ्ने कालो शिशाको गाडी खोसेर त्यसमा हिंडने, नभए घरैमा झ्याल ढोका बन्द गरेर बस्ने ।
१.काठमाडौंमा नबस्ने, २.मेलम्ची जस्ता योजना बनाउँदा अन्तर निकाय समन्वय गरेर खन्ने तथा पुर्ने काम घरी–घरी एउटै काम नदोहोर्‍याउने, ३.काम छिटो सक्ने र तुरुन्तै निर्माण तथा सरसफाइ गरिहाल्ने अनि ४.काठमाडौंको वातावरणका सम्बन्धमा गम्भीर हुने ।
करुण थापा, भिजुअल एनिमेटर/सम्पादक
हालै मेरो निर्देशनको चलचित्र ‘तिमीसँग’को छायांकनका लागि घान्द्रुक र घोडेपानीमा लगेर मैले आफ्नो टिमका ४० जनालाई ३५ दिनसम्म काठमाडौंको धूलो–धूवाँबाट जोगाएँ । म त्यसमै खुसी छु ।
शिशिर राणा, निर्देशक/अभिनेता
मास्क लगाएरै खाने, सुत्ने र घुम्ने ।
काठमाडौं छाडेर विदेशतिर घुम्न जाने र सबै बाटो–घाटो बनिसकेपछि फर्कने ।
प्रल्हाद तिमिल्सिना, गायक
आफैंले काठमाडौं छाडे त बचिएला तर काठमाडौंलाई धूलो–धूवाँले नछाड्ला । दीर्घकालीन उपाय छ, अवलम्बन मात्र नभएको हो ।
सागर राज, संगीतकर्मी
धूलो–धूवाँ हट्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले आफूलाई जोगाउन तिर लाग्नु मै भलाइ छ ।
रञ्जन रिजाल, मोडल
कि काठमाडौं छाड्ने कि यतै बसेर धूलो खाने । यसबाहेक अरू कुनै उपाय देख्दिनँ ।
जुन जिल्लाबासी हुनुहुन्छ, त्यहीँ फर्कनुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस् । जे काम जान्नुभएको छ, त्यो काम आफ्नै जिल्लामा गर्नुहोस् । काठमाडौं नेताहरूलाई छाडिदिऊँ । जनताको ख्याल नगर्ने जतिलाई धूलो र धूवाँ खान यतै छाड्नु नै राम्रो उपाय हो ।
लोकराज अधिकारी, गीतकार/रेडियोकर्मी
पैदलयात्री र मोटरसाइकल चालकले अब मास्कसँगै रेनकोट जस्तै डस्टकोट सिलाएर लगाउनु बाहेक अरू कुनै उपाय छ र ?
मास्क लगाउने ।
काठमाडौं छाडेर पोखरा आउनुहोस्, म त अहिले यतै छु ।
दिया मास्के, अभिनेत्री/रंगकर्मी
काठमाडौं छाड्ने, टन्टै साफ ।
आसिफ शाह, निर्देशक
यो प्रश्नको जवाफ देश विकासको ठेक्का लिएका नेताहरूसँग लिँदा उपयुक्त होला ।
अमृत सुनुवार, छायांकार
मास्क नै होला, राम्रो उपाय ।
भत्काइएका सडकहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ । मेलम्चीको पानी आएर काठमाडौंको अनुहार धुन पाए सबै ठीक हुन्छ ।